दुई वटा डुंगामा टेकेको माओवादीले केपी ओली नभएको बेला नै किन गर्यो सरकार छाड्ने निर्णय ? – Etajakhabar
दुई वटा डुंगामा टेकेको माओवादीले केपी ओली नभएको बेला नै किन गर्यो सरकार छाड्ने निर्णय ?
काठमाडौँ, २७ पुस – नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाउने भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा नेतृत्व गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री महरा राजधानी बाहिर भए पनि आजै एक वरिष्ठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने तयारी गरिएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय बनाए पनि हटाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण माओवादी केन्द्रका मन्त्री मन्त्री पदमा बहाल थिए । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन गरे केपी ओलीको पार्टी एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी मन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओली देशमा नभएका बेला राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: १८:४४:४५